होण्डा ग्राजियाको न्यू मोडल बिएसभिआई डिआरएस र डिएसएस नेपाली बजारमा, मूल्य कति ? - Artha Dabali : nepal economic and business news portal
होण्डा ग्राजियाको न्यू मोडल बिएसभिआई डिआरएस र डिएसएस नेपाली बजारमा, मूल्य कति ?
काठमाडौँ / नेपालका लागि होण्डा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको अधिकारिक बिक्रेता स्याकार ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडले नेपाली बजारमा होण्डाको नयाँ उत्पादन सार्वजनिक गरेको छ ।
आइतबार एक कार्यक्रमकाबीच कम्पनीले होण्डाको नयाँ उत्पादन ग्राजिया बिएसभिआई मोडल सार्वजनिक गरेको हो । को नयाँ मोडल सार्वजनिक भएको छ ।
१२५ सिसी इन्जिन क्षमतामा उपलब्ध नयाँ बिएसभिआईनिकै आकर्षक र स्टाईलिस लुकमा रहनुका साथै व्यवहारिक फिचरहरुले पूर्णता रहेको रि–डिफाइनरी उत्पादन रहेको कम्पनीले बताएको छ ।
१५५ एमएम देखि १७१ एमएम ग्राउण्ड क्लेरेन्स रहेको यस स्कुटरको स्पिडोमिटरमा माइलेज फिचर समेत उपलब्ध रहेको छ । यस फिचरले स्कुटरले दिने रियल टाइम माइलेज, एभरेज माइलेजका साथै डिस्ट्यान्स टू एमप्टि जस्ता जानकारी प्राप्त गर्न समेत राइडरलाई थप सहज हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
होण्डाको पीजीएम–एफआई (प्रोग्राम फ्यूल इन्जेक्सन) टेक्नोलोजी प्रयोग भएकाले यस स्कुटरले बढी माइलेज र पावर समेत दिने कम्पनीको दाबी छ ।
ग्राजियाको यस नयाँ बिएसभिआई डिएलएक्स मोडलमा जाम भएको समयमा इन्धनको बचत गर्नको लागि आइडिलिङ्ग स्टप रहेको छ भने नयाँ बिएसभिआई एसटिडी मोडलमा इन्जिन स्टार्टरस्टप स्वीच समेत उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
बहु प्रतिक्षित होण्डा सिबि ३५० आर एस अब नेपाली बजारमा, मूल्य कति ?